Ambany izany ny gasy? | Hevitra MPANOHARIANA
Faly aho nahita ny hevitra naposakao teto.Izaho koa dia anisan'ireo tena tohina, nahita an'io afisy io, raha sendra nandalo teo anoloan'ny alliance française Andavamamba, andro vitsivitsy lasa izay.
Vao nahita ilay sary maimaika aho, dia nihevitra fa hisy mpanoratra hanao fampirantiana any paris, ary aseho afisy aty ny mikasika izany. Dia novakiako toy izao ilay sary: avy any amin'ny firenena alavitra be takona any (ao ambadiky ny tour eiffe), dia misy mpanoratra amin'ny teny frantsay, hotonga eto paris. Tsy hita misongadina manontolo intsony ilay mpanoratra fa salovanan'ny frantsay ny momba azy, sa ilay mpanoratra mihitsy ve no te hiditra ao anatin'ny frantsay? asa re!
Gaga aho ny andro manaraka nandalo teo, fa hay eto no hatao ny fampirantiana.
Ny tena nandratra ny masoko, dia nahita ilay tour eiffel toa mitsingevana, maneloelo sa mamingana ny lalan-kodiavin'ilay mpanankato aty amin'ny fireneny. Dia lasa ihany ny fisainako hoe sa ny tiana havoitra amin'ilay afisy dia hoe ireto ny mpanankato Malagasy fa mbola mankasitra sy miazakaza mafy hanenjika hifikitra amin'ny frantsay.
Dia mba mametram-panontaniana toa anao koa aho: mba ahoana ny eritreritry ny mpanakanto voakasik'io seon-javatra io mivantana? Faly ve izy fa izay avoakan'ny afisy izay mihitsy ny fahatsapana henony, SA sorena izy fa tsy afa-manoatra noho io ivon-toerana io misahana ny asa-sorany?
Inona moa no azon'ny fanjakana isan-tokony hatao manoloana ny trangan-javatra toy itony, rehefa izay no nifanarahan'ny mpanakanto sy ny mpikarakara ? Mitazana fotsiny, na marary anaty aza.
Miombo-kevitra aminao aho, fa raha tiana ny halaza sy hahazo tsena mivelatra amin'ny asa-soratra, dia mila manoratra amin'ny fitenim-pirenena be mpiteny isika. Nefa, raha ny fahalalako azy dia mbola any amin'ny laharana fahatelo, aorian'ny teny Anglisy sy teny Espaniola ny teny frantsay.
Izaho manokana aloha, mpandala ny teny Malagasy, ary sarotiny amin'ny maha Malagasy ahy, dia tena sorena amin'ny trangan-javatra tahak'itony. Raha mba izaho moa hoy aho no mpanoratra dia tsy mba handany andro hamoaka boky amin'ny teny frantsay izany aho nefa, hataon'ny olona tahaka izao. Nefa moa isika mbola miaina aoa anatin'ny tarazon'ny fanjanahan-tany sy ny francophonie ka tsy misy hanomezan-tsiny ny mpanoratra izany.
Soa fa efa vain-dohan-draharahan'ny fanjakana koa izao ny fifehezana ny teny Anglisy.
Nampidirin'i latina @ 08:14, 2007-04-18 [Valio]
Misaotra anao nanoratra avy hatrany sady nanamarina izay nolazaiko
Nampidirin'i jentilisa @ 08:28, 2007-04-18 [Valio]
Tena mbola zanatsaina ny gasy maro. Indrindra ny gasin'i Lafrantsa, tsy dia mahagaga koa. Maro no tohina rehefa lazaina an'izany, kanefa dia tena izany no zava-misy.
Nampidirin'i lapino @ 14:08, 2007-04-18 [Valio]
Ambany izany ny gasy
Mahasorena tokoa izany ry Jentilisa. Nefa kosa tsy maintsy efa hitan'ny mpanakanto izany afisy izany talohan'ny hanaovana azy, raha tsy izany manko dia mbola mitombo roa heny izany ny tsy fiheverana an-dry zareo ireo satria izay tian'ilay mpikarakara (Alliance française) atao ihany no tsy maintsy nekena.
Nampidirin'i Su @ 14:17, 2007-04-18 [Valio]
Atao ahoana e? mampalahelo anefa moa inona no azo atao? tsy misy afa-tsy ny tsy manao toy izay heverina ho tsy mety rehefa tonga ny fotoana handraisana andraikitra koa... resa-bola... resaka tombontsoa... de ny malagasy malagasy ihany... ciao
Nampidirin'i gasy @ 14:42, 2007-04-18 [Valio]
rehefa misy sangan'asa vita amin'ny teny malagasy, na vokatra malagasy dia mangina ny ambiny e. azoko aroso ohatra JJ Rabeaivelo izany nanoratra tamin'ny teny 2 tonta, Randja Zanamihoatra sy ireo voarakitra ao amin'ilay hoe "Hain-teny d'autrefois".
sahia milaza fa mbola tsy nisy mpanoratra malagasy amin'ny teny frantsay (raharimanana, rakotoson, etc) nahatoraka an'ireo !! tsy hoe rehefa miberoberoka faran'ny tsy hay akory dia dada ka dada :-)) saingy ry zalahy/zavavy no tena midingin-drambo...
Nampidirin'i Rajiosy @ 16:38, 2007-04-18 [Valio]
AMBANY IZANY NY MALAGASY ?
Miatrika jentilisy - hampandroso sy hampiroborobo
marina fa mampalahelo ny teo-javatra toy izany fa aza adino mety misy FITRANGAN-JAVATRA tsy fantatsika ao amabadika ao = Mety ilay NAMETRAKA NY SARIN'I Tour Eiffel no tompom-bola nanatota ireo affiches koa dia nataony arak'izay TIANY sy SAI-PATANY. Manify anie ny finances-tsika e ! Aza adino io ! Koa dia manararaotra ny manam-bola.
Ny manoratra amin'ny teny hafa maro aloha amiko dia tsara ary izany tsy milaza velively fa voazanaka ny tena. Fa ny manao ny an'ny tena ho lasa-danja amin'ny an'ny sasany no tsy mety ! Ankehitriny dia efa maro ireo ankizy sy zatovo malagasy no mirona mandalina ny maha-malagasy azy ireo na dia mbola tsy dia mahafehy ny teniny tsara aza ny sasany - Efa dingana iray lehibe io ! Tsy maintsy misy fiandohany ny zava-drehetra ary mila faharetana koa izany indrindra avy amintsika samy malagasy ! Hifalio sy omeo hasiny izay kely vita fa MAMPAHERY izany ! Mila mifampitsitsy sy mifanohana isika ny hafa anie ka ny azy ihany no ampiany e !
Jereo ity tranonkala ity
Nampidirin'i Mahagagamada @ 22:10, 2007-04-18 [Valio]
azy ny vola
Marina tokoa fa azy ny vola. An'ny minisiteran'ny kolontsaina frantsay araka ny eritreritro. Noho izany tsy maintsy manandratra ny azy izy. Ny tena mahasorena kosa dia ny "fisolokiana" ny momba ireo mpanoratra malagasy manoratra amin'ny teny frantsay sy ny mombamomba azy hahatonga ny taranaka hihevitra kokoa ny teny frantsay.
Na izany na tsy izany tokony hampieritreritra ny fanjakana malagasy ny toe-javatra sahala amin'izao amin'ireo mpanoratra malagasy amin'ny teny malagasy kosa
Nampidirin'i jentilisa @ 07:11, 2007-04-19 [Valio]